Ogaden News Agency (ONA) – Warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO iyo Khasaarihii Cadawga Soo Gaadhay
Warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO iyo Khasaarihii Cadawga Soo Gaadhay
Wararka laga helayo Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa sheegaya dagaalo dhowr ah oo CWXO iyo kuwa gumaysiga Itoobiya ku dhexmaray goobaha ay ka joogaan cadawga dalka Ogadenia halkaasoo ciidanka cadawga lagu wiiqay khasaare aan faahfaahintooda lasoo wada ururinina lagu gaadhsiiyay. Dagaalada aan helnay warbixintooda ayaa udhacey sidan;
3/10/14 Kore oo Dagmada Dhanaan ee Gobolka Shabeelle katirsan dagaal ka dhacay waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay 3 askari 4 kalana waa lagaga dhaawacay.
10/10/14 Tuuto oo Farmadow iyo Gabagabo udhaxaysa kanatirsan Gobolka Qoraxay waxaa kuburburay 1 gaadhi oo kuwa cadawga ah waxaana oo ka baxsanayay jid gooyo ay cwxo u dhigeen waxaana ku baaba’ay dhamaan wixii saaraa.
11/10/14 Dhagaxbuur rasaar ay cwxo kufureen gaadhi uu cadawgu leeyahay waxay kudileen 3 askari 7 kalana way kaga dhaawaceen.
13/10/14 Taaginduur oo Dhagaxbuur katirsan waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 3 askari halka 3 kalana lagaga dhaawacay.
14/10/14 Raraafid oo Galaalshe u dhaw dagaal kadhacay waxaa ciidamada gumaysiga lagaga dilay 3 askari 4 kalana waa gaga dhaawacay.
14/10/14 Boodhlay oo dagmada Sagag ee Gobolka Nogob katirsan dagaal xoogan oo kadhacay waxaa ciidamada wayaanaha loogu gaystay khasaare aan lasoo faahfaahinin.
15/10/14 Galaalshe weerar aad u culus oo ay CWXO ku qaadeen waxay ciidanka gumaysiga ku gaadhsiiyeen khasaare laxaad leh oo aan faahfaahin laga helin.
15/10/14 Habaaswayne oo Dhagaxmadow katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 5 askari 4 kalana waa lagaga dhaawacay.
16/10/14 Gunagado dagaal CWXO iyo kuwa gumaysiga Itoobiya ku dhexmaray waxaa ciidanka gumaysiga lagu gaadh siiyay khasaare naf iyo maalba leh.
17/10/14 Duleedka Dagmada Dhagaxbuur gaadhi uu cadawgu leeyahay oo ka baxsanayay CWXO ayaa ku gadoomay waxaana ku baaba’ay dhamaann ciidankii saaraa.
18/10/14 Quruuraxle oo Shaygoosh katirsan rasaas xoogan oo ay CWXO ku fureen kolanyo baabuur ah waxaana cararkii gadoomay 1 baabuur khasaaraha goobtaas ka dhashay waxaa lahubaa bakhtiga 8 askari dhaawacana waxaa lagu qaaday 5 gaadhi oo kuwa ciidanka ah.